Google Maps Aqaba
Aqaba (English: ; Arabic: العقبة‎‎) is the only coastal city in Jordan and the largest and most populous city on the Gulf of Aqaba. Situated in southernmost Jordan, Aqaba is the administrative centre of the Aqaba Governorate. The city has a population of 188,160 and a land area of 375 square kilometres (144.8 sq mi). Today, Aqaba plays a major role in the development of the Jordanian economy, through the vibrant trade and tourism sectors. The Port of Aqaba also serves other countries in the region.
Info about Aqaba
Belongs to: Jordan
Cities of Aqaba